हुनत हाम्रो बानी- कसैले के कुरा गर्‌यो भन्दा पनि कसले त्यो कुरा गर्‌यो भन्नेमा बढी बहश गर्छौं। त्यसैले हामी को हौं? भन्ने चर्चा चल्दैजाला, अझ बढी त हामीले पस्कने सामग्रीहरु पढेपछि त्यसको बहश बढ्ने नै छ। तर हाम्रो सरोकारको बिषय यो होइन। अब हामी के गर्छौं? अनि यो साइट किन? भन्ने प्रश्नको जवाफतिर लागौं।
सल्लाह र सुझाबका लागि हामीलाई निर्धक्क भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।